Ahoana ny fomba fampiofanana Doberman | Tontolo alika
Ny Doberman dia karazana alika izay efa an-taonany maro, ary mandraka ankehitriny, dia noheverina ho mampidi-doza. Na izany aza, ny toetran'ny biby dia tsy hiankina amin'ny karazany, fa kosa amin'ny fanabeazana raisiny.
Ity alika ity dia volom-borona be fitiavana izay tia mianatra zava-baovao, ka raha vao nahazo iray ianao dia holazainay aminao ny fomba fampiofanana doberman.
1 Inona no ilaiko hampiofanana Doberman?
2 Ahoana ny fanabeazana azy?
Inona no ilaiko hampiofanana Doberman?
Mba hanabeazana ny namanao dia mila zavatra mitovy ilainao ianao raha te hampianatra alika hafa: faharetana, fanajana, fitiavana, fitsaboana ary fotoana. Tsy mila vozona vozona ianao, fitaovana iray izay mety hanimba be ny biby koa.
Ny zava-dehibe indrindra hampianarana ny Doberman dia ny fihetsika izay anananao miaraka aminy. Mazava ho azy fa mila mianatra fitsipika fototra iaraha-miaina izy, saingy tsy maintsy ataony tsikelikely izany, fantany amin'ny fotoana rehetra fa afaka matoky anao izy ary tsy hanao ratsy aminy akory ianao.
Ahoana ny fanabeazana azy?
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatra dia ity dia karazany iray manana haavon'ny angovo avo lenta, izay midika fa mila manao fanatanjahan-tena isan'andro mba hahasambatra sy ho tony. Araka izany, zava-dehibe ny mitondra azy hivoaka sy / na hihazakazaka, hatramin'ny mbola kely. Mandritra ny roa volana dia fotoana mety hanombohana ny famoahana azy eny an-dalambe mba ho zatra ny fofon'alika sy olona hafa ary amin'ny tabataba.
Ankoatra izany, ao an-trano dia tsy maintsy mampianatra azy fitsipika vitsivitsy ianao, toy ny »mipetraka» (mipetrapetraka), »mbola», »midina» (midina na mandry), na hanome ny tongotra aza. Amin'ny Ity lahatsoratra ity Azavainay ny fomba anaovanao azy. Ary koa, raha tsy tianao hihanika eo amin'ny fanaka izy, aza avela hanao izany mihitsy izy, raha tsy izany dia hafangaro izy.
Isaky ny manao zavatra tsy mety izy, toy ny fitsakoana kiraro, dia aza mampijaly azy. Manontania tena hoe maninona no manao an'io ary mitady vahaolana. Ny tena fahita dia ny fitondran-tenany toa izao satria mankaleo azy; Raha izany dia araraoty ny fotoana rehetra azonao atao mba hilalaovana aminy. Araka izany, ity fihetsika ity dia hirona hanjavona irery.
Ny Doberman dia alika izay afaka ny ho tonga sakaizan'ny olombelona mora indrindra. Mila hajaina sy be fitiavana fotsiny ianao mba hahafahanao mahazo ny tsara indrindra avy amin'ny tenanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana no hampiofana Doberman
Mitadiava mpiara-miasa amin'ny biby fiompinao amin'ny alàlan'ny Net Pet App